Rem Al Habsheim, umphathiswa Intsebenziswano yamazwe ngamazwe ye-united arab Emirates, ngexesha kwi-utyelelo IMA upcoming izifundo zoqeqesho i-semester iza kubanjwa ukususela unum kwi-matshi, ezintathu juillets.
Enrollment kwi-ukungaziphathi ikhosi ye-u-u-u -ezintandathu octobres ingaba ngoku vula. Baya kuba ivaliwe ngolwesine umhla we-kwi-nesibhozo octobres to wear ngaphandle. I-arab ihlabathi Institute inikezela izifundo kwi-ezimiseleyo isi-kwaye dialectal isi -: algerian, egyptian, moroccan, syrian-lebanese Arabic oonombumba ingaba kunabela ngaphandle ngomhla ezintathu ezahlukeneyo amanqanaba ranging ukusuka Kukukhanya Bun ye-CEFR kwaye ingaba wanikela: Zonke izifundo ahambelana nesicwangciso CEFR njengokulandelayo. Ngokunqakraza kwi ngamnye kunjalo, uya kuthatyathwa kwi yayo yokusebenza. Ukuba unayo zange ithathwe a isifundo kwi-IMA, kufuneka, phambi kwenu irejista, ukhangele inqanaba yi-ukuthathela ubeko uvavanyo oonombumba isi-ngu igosa ulwimi ngokufanayo bonke arab amazwe: isetyenziswa lisebe ngaphezu amane anamashumi yezigidi abantu jikelele ehlabathini. Kubalulekile ulwimi yokubhala (cinezela, uluncwadi.), kodwa kanjalo isetyenziselwa lomlomo, namajelo eendaba, kwiimeko ezisemthethweni amajelo e-unxibelelwano, kulandelwe kwaye ugcinwa, kwaye nayiphi na incoko ukuba iqhubeka phakathi kwe-speakers ka-Arabic musa ukuthetha efanayo dialect. Dialectal isi-ngu-ulwimi unxibelelwano ngokufanayo kwi-ezahlukeneyo arab amazwe. Kukho ezintathu eyona iintsapho dialects: Maghreb, kumbindi Mpuma ne-Gulf. I-arab ihlabathi Institute inikezela izifundo kwi-ezimiseleyo isi-nesiarabhu dialects: algerian, egyptian, moroccan, syrian-lebanese, ngoko ungakhetha ulwimi ukuba i kstars.
Ukukhetha: ezimiseleyo nesiarabhu, dialectal nesiarabhu, egyptian, emntla afrika okanye syrian-lebanese. Ukuvula i-iiyure: ngemini, kwaye ngokuhlwa ngexesha ngeveki ngokunjalo mgqibelo ntsasa. Iinkcukacha ezininzi, bona ucwangciso kwincwadi yokufunda ka-ubhaliso. Iindleko a ezintathu -iyure uqeqesho: iqukwa ka-VAT kuba abantu abane ezintlanu HT ezintlanu zine – TTC kuba ishishini intensive izifundo ziqhutywa oqingqiweyo ngexesha esikolweni iiholide kwi-Paris.
Yonyaka kwishedyuli iya kupapashwa kwi-januwari apha
Ngalinye nesifundo iqhutywa amancinane iqela ezintlanu ukuze abantu ababini, premises ye-Institute of the arab ihlabathi. Nganye kwindawo yokusebenzela yenziwa yi-ezimbini ootitshala. Le inye indlela, acclaimed yi-zethu abafundi, iqinisekisa ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka learning: dynamism, ngezixhobo ezahlukeneyo accents, iindlela ngokwenza, personalities ngokweentswelo zabo uluhlu lwezinto, abathathi-nxaxheba nokutya lunch kwi omnye dining kwiindawo IMA okanye engingqini enika ample amathuba bonke tastes kwaye zonke kolwabiwo-mali. Iindleko a ezintathu -iyure uqeqesho: iqukwa ka-VAT kuba private abantu, zine, zintlanu HT, okanye isihlanu -ezine iqukwa ka-VAT kuba amashishini. Njengoko kuba bonke omdala izifundo, oqeqeshawayo ikhadi ikuvumela ukuba kuxhamla eziliqela okuninzi ye-IMA. I-centre of ulwimi kwaye civilization arab ngu-referenced, i-Data iyasikeka, kwaye banikwa uqeqesho unako sixhaswe i-CPF. Kuba zoqinisekiso le uqeqesho, uyavuma ukunikela na ukuhlolwa kokusebenza kwi-Arabic ebhalisiweyo kwi-RNCP (National Bhalisa ka-Elinolwazi Iziqinisekiso): Evlang (nangaliphi na inqanaba) okanye DCL (kuba i-intermediate inqanaba lesibini e ubuncinane)
← Indlela kuhlangana a kubekho inkqubela
Ividiyo kunjalo isi-for beginners →